पि आर को मायाँ (कथा) | NepalDut
पि आर को मायाँ (कथा)
प्रकाश शर्मा बगलुङ
फोनको घन्टी बज्यो ,अमेरिका बाट पासाको फोन रहेछ। ‘अचेल पैसा ले कसरी चलुम भएको छ,स्कुलको फि पनि महंगो भएको छ, नया आर्थिक बर्ष बाट फि बढाउने निर्णय भयो रे!’ फोनको औपचारिकता सुरु नहुँदै बोली लीना । दिन भर पेट्रोल पम्पमा काम गरेर आएको पासा धेरै भएको छैन लीनासँग गफ्फिने वानी पारेको । सन्जालबाट सुरु भएको उसको गफ हप्ता दिन नहुँदै टेलिफोनमा पुग्यो।भोली बिहानइ आइ एम इ जानु मैले १००० हजार डलर पठाइदिन्छु । खुशीले फुरुङ्ग भाई लिना अनी सिध्न थाली ।“बेबी कसरी बिताउछौ दिन हरु भन? तिम्रो बोली सुन्न नपाउदा मा जोडी गुमेको चखेवा जस्ताइ हुन्छु तिमी पत्याउदैनौ होला मेरो बिद्याको कसम म लास्त बोर फिल गर्छु बेबी!!” लिनाले अलिकती इमोसनल बनाउछे पासालाई। ग्राहक र फिरन्तेहरुलाई पेट्रोल डिजेल हाल्दा गाडीमा देखिने प्रेमिल जोडी हरुको कर्तुत हेरेर आफुले कल्पनामा दिन बिताउन वाध्य पासालाई लिना एक सोझो माया गरेर जिन्नगी बिताउन मिल्ने केटी जस्तो लाग्छ। कुनै जोडीले केही नयाँ लगएको देख्यो भने नि लिनालाई सम्झेर सपिङ्ग गर्न थालेको थियो पासा । “अब माघमा बिदा आउछु तिमीलाई बिहे गरेर आफ्नी बनाउछु ,तिमी नभए सम्म म आफु लाई अपुरो लागेको छ लिना , कतै जोडी देख्दा नि आफुलाई अवाक लाग्छ, तिमी सङ्गै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ,तिम्रो फेस्बुकमा चित्र हेरेर टहलिने त अचेल बानी नै भैसक्यो मेरो” पासा थप्छ । “मैले पनि स्कुलमा टिचरले पढाउने कती अक्षरमा तिम्रा च्याटहरु देखिएकी छु, कुनै कथाको पात्र जस्तो एक सम्योगान्त कथाको जस्तो लाग्छ कुनै प्रेमिल जोडीको बियोग त सुन्न नि सक्दिन ,अचेल एक्लै तिम्रो कल्पनामा बिताउन नै आनन्द लाग्छ” भनेर दुबै जना एक आपसमा एक अर्काको मह्त्त्व दर्साउदै थिए।जती सक्छौ छिटो आउ माघ सम्म नि मलाई राख्लान जस्तो लाग्दैन मलाई,उमेर पुगेकी भनेर घरमा आमा जैले गनगन गर्नु हुन्छ,हिजो त बाबा लाई मेरो ग्रह हेर्न नि पठाउनु भएछ ज्योतिष को मा। मैले ब्याचलर सकाउछु अनी बिहे गर्छु भन्दा नि मेरो कुर सुन्दैनन घर मा। तिमी ले त बुझ्छौ नि बेबी म कती तनाब मा हुंला!!!!
ल ल चिन्ता नगर म सकेसम्म छिट्टो आउछु,तिमी मेरो भन्दा अरुको हुन सक्दैनौ ऐले लाई क्रेडिट कार्ड सकियो जस्तो छ ऐले म्यासेन्जरमा कुरा गरौला भनेर फोन राख्यो पासा। लिनाले टेक क्यर बेबी मिस यु सो मच् भने कुरा टुङ्ग्याइ।
तेत्तिकै मा लिना को फोन फेरी बज्छ, ओेइ कहाँ बिजी छस , दुनियाँ सँग झुल्न लाज लाग्दैन तलाई ?? जैले केटा सँग धेरै नबोल फोनमा भनेर एस्लाई कैलेही लाग्दैन , अर्को लाई दु:ख दिने नियत छ भने मलाई छाड्दे त जस्ता केटीको लाइन लागेको छ घरमा ।
तलाई भनेर कती बर्ष कुरेर बस्नु ,आशु मिस्त्रित आवाज निकाल्छ आकाश। बिहे गर्ने भनेर इन्डियन आर्मी बाट बिदा आएको मान्छे हो आकाश। लिना सँग दुई चार बर्षा देखी सम्बन्धमा छ।
हैन सुनन , केटा हरु केटीको फोन नं पाउ नै हुन्न कल गरेर हैरान गर्छन् ,अेरिका बाट पासा ले कल गरेको थियो तिमीलाई बिहे गर्न अौछु भन्छ, म तेस्को गुडिया जस्तो गरी बस्दिने जस्तो !!!! मेरो प्राण होउ आकाश तिमी । तिमीलाई छोड्न सकेको पल म यो धर्तीमा रहन्न शायद आकाश । तिमी मेरो मन मा यसरी जरा गाढ्यौ कि म तिमी बाट छुट्करा पाउने एुटा मात्रा अप्सन भनेको चिता हो ,जह तिमी तनाबमा चुरोट लिएर बसिरहेको हुनेछौ , आगो मेरो शरीरमा जल्दै गरेको !!!!!!!
आकाश भन्छ तिमी मलाई फसाउदै छौ लिना , म चाहेर पनी तिमी लाई सम्झाउन सक्दिन लिना, तिम्रो खुशी नै मेरो खुशी भनेर मैले कती कुरा घर बाट पनि बिद्रोह गर्ने सोच बनाएको छु ,तिमी भने अझै पनि अरुको आशमा रमाउदै छौ लिना!! अब देखी त्यस्तो न गर्ने भनेर कसम खाएर उनी हरु नियमित प्रेमिल बन्छन ।
“उम्म साँच्चि आज मेरो छेउ मै बस्ने केटी ले कस्तो राम्रो वन पिस लगाकी थि, मलाई पनि लगाम लगाम भएर, तर के गर्नु आफु सँग पैसा छैन, लिनाले कुरा सुरु गर्छे । कल्पन्थे त्यो वन पिस लगाएर तिम्रो हात समतेर फन पार्क मा टहलिएको, सब प्रेम जोडीहरुको बिचमा हाम्रो जोडीको सबैले प्रशंसा गरेको!!!”
उम्म… भोली ११ बजे न्युरोड आउनु शपिङ गरेर उतै जाउला नि त हुन्न?? आकाशले उदार भएर आफ्नो स्विक्रिती दिन्छ। काठमाडौं मलमा आईस क्रिम नि खानु पर्छ नि । भोलीको कल्पना गर्दै फोनको बिट मर्छ । खाना खाइ ओरी बसेकी थि लिना त्यो बेला ,गएको बिजुली पनि आयो घरबेटिको वाइ फाइको हरियो बत्ती बल्न थालेसी लिनालाई निन्द्रा पर्दैन, कारण अरु केही नभएर उही सन्जाल हो । देश बिदेशबाट लिना सँग साथी बन्ने हरुको लाम लाग्छ ,उस्को जिउ डाल ले उसलाई सबै माझ तेस्ताइ बनाएको छ कि,इन्कार गरेर साध्य पनि छैन । ब्लक गर्नु, सबै लाई बिरामी छु भनेर बोल्दिन भन्दा नि सुख छैन लिनालाई। कहिले काही दिक्क भएर सुनाउछे केटी भएर जन्मिनु नि गार्है छ गाठें ।
नबोलुम ठुलि भयो भन्छ, बोलम मायाको नाटक गर्छन् केटाहरु ,सुरु सुरुमा अल्मल मै बिथ्यो रे समय तर जब एक दुई जना केटा सँग घुल्मिल हुँदै उनिहरुलाई बुझ्न थालि अनी जिन्नगीका बस्तविक भोगाइहरु सुरु भए उस्का। संजालमा नाटक गरी गरी बोल्नु,भये नभएका कुरा हरु प्रस्तुत गर्नु , इडिट गरी गरी फेस्बुक टुइटरमा फोटाहरु पोस्टिनु उसको दैनिकी बन्यो। समय मिलाएर केटाहरु सङ्ग गफ्फिनु उसको आद्दत नै भनुम ।वाइफाइको सिग्नल देखिना साथ उस्को म्यासेन्जरमा कल गर्ने हरुको लर्को नै लाग्छ,जापानमा खुसन छ, क्यानडामा सन्तोष छ पोर्चुगलमा कृष्ण ,अस्ट्रेलियामा किरण छ । साउदीमा नारायण ले त उस्लाई पटक एन्ड्रोइड फोन पनि पठाइदिएको थ्यो। खजुर ,पिस्ता त उस्ले कैलेइ किन्दिन। सबै सँग बोल्दा बोल्दाइ रातीको ११ बज्यो। निदाइसकेकी घरबेटी उसको भोइस च्याटको आवाज ले ब्युझियिन्!!! “लिना सुत्नु पर्दैन?” भन्दै उसैको ढोका ढक्ढकाउन पुगिन ।
हैन साथी साथी सँग पढाई कै बारेमा कुरा गरेको भनेर आफ्नु अगाडि भएको पुस्तकलाई देखाओटी प्रार्थमिकता दिदै थीइ लिना। उसको अर्को म्यासेन्जरमा कल आयो ।